Margarekha दिनमा कतिपटक खानुले स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ठिक ? – Margarekha
दिनमा कतिपटक खानुले स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ठिक ?
कसरी खाने, कति खाने ? यसबारे हामी अभ्यस्त हुँदैछौ । भनिन्छ, हामीलाई खानपानबारे उत्ति ज्ञान छैन । जबकी प्राण धान्नका लागि खाना आवश्यक हुन्छ । खाना ति सबै स्रोत हुन्, जसले शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त गरिन्छ । तर, खानपानबारे हामी उस्तो जानकारी लिने गर्दैनौं ।
खानपान सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएमा मात्र हामीले त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्छौं । किनभने एउटै खानामा सबै किसिमको पोषक तत्व पाइदैन । एउटा खानेकुरामा जुन पोषक तत्व पाइन्छ, अर्कोमा त्यो नपाइन सक्छ । त्यसैले सबै किसिमको पोषक तत्व ग्रहण गर्नका लागि थरीथरीको खानेकुरा खानुपर्छ ।
८ माघ २०७४, सोमबार ०८:४० प्रकाशित